Great Romantic ညစာနှင့်အကြံဥာဏ်များ! - သိကောင်းစရာများနှင့် Great Ideas!
အနိမ့်အပေါ်ပြိုင်ဘက် crock အိုးအပူချိန်
လင်းယုန်အမှတ်တံဆိပ် key ကိုထုံးပိုင်မျှမုန့်ဖုတ်
Great Romantic ညစာနှင့်အကြံဥာဏ်များ!
နေရာချချိန်များ - စားပွဲပေါ်မှာအထည်၊ placemats, လက်သုတ်ပုဝါနှင့်ရေမျက်မှန်များဖြင့်စားပွဲကိုကောင်းစွာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားရန်အချိန်ယူပါ။
အပြင်အဆင်: ဤသည်စျေးကြီးသို့မဟုတ်ပီပီဖြစ်ရန်မလိုအပ် ... စားပွဲပေါ်လှပသောပန်းပွင့်များသို့မဟုတ်ပွင့်ချပ်အနည်းငယ်, အချို့သောဖန်ပုတီးတစ်လုံးသို့မဟုတ်သဲနှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိရေတိမ်ပိုင်းပန်းကန်သို့မဟုတ်ပန်းကန်သည်အစားအစာနှင့်အခါသမယပေါ် မူတည်၍ လှပသောစားပွဲအတွက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အလင်းရောင်: ဤသည်ရင်ခုန်စရာညစာစားရန်စိတ်ခံစားရန်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်! သင့်တွင် dimmer တစ်ခုရှိပါကအလင်းကိုလျှော့ချပါကစျေးသိပ်မကြီးသောဖယောင်းတိုင်အချို့ကိုသိုလှောင်ထားပါ။ ( မှတ်ချက်။ ။ ညစာစားချိန်တွင်သင်၏ဖယောင်းတိုင်များမွှေးကြိုင်အောင်အမြဲတမ်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ )
ဂီတ: ဤသည်စိတ်ဓါတ်များကိုတင်ထားရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောအချစ်ဇာတ်လမ်းအချို့ကိုဖွင့်ခြင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပို၍ တိုးစေသည်။
ဝတ်စားဆင်ယင်: သင်သည်အိမ်တွင်ညစာစားနေသည်ဆိုပါကသင်သည်ညစာစားပွဲကို ၀ တ်ဆင်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်အထူးအခါသမယတစ်ခုကဲ့သို့ခံစားရစေသည်။
အစားအစာမှ! ကလေးများအိပ်ယာ ၀ တ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ချစ်သူများနေ့၊ ချစ်သူများနေ့၊ ရင်ခုန်စရာစနေနေ့ညများကိုသင်ကျင်းပနေသည်ဖြစ်စေ၊ ဤချက်ပြုတ်နည်းများပြင်ဆင်ရန်ရိုးရှင်းပြီးတကယ်အံ့သြဖွယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။
ရိုးရှင်းသောခေါက်ဆွဲ၊ ဝိုင်ခွက်တစ်ခွက်…ပြီးပြည့်စုံသောရင်ခုန်စရာညစာ ဒီအံ့သြဖွယ် Linguine Carbonara ကြွယ်ဝပြီး creamy သေးပါကလုပ်ရန်လွယ်ကူ! ဒီဟာကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းအပြီးသတ်စတင်နိုင်ပါပြီ။
at Maria ပဲ & နှစ်ခွ များအတွက်အလွစာရွက်ရှိပါတယ် Lemon Basil Butter Sauce နှင့်အတူဒိန်ခဲ Ravioli ! ဒီပန်းကန်သည်မြန်ဆန်။ လွယ်ကူရုံသာမကလုံးဝတွန်းလှန်နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။
Roasted Tomato Sauce နှင့်အတူအီတလီ Sausage Pasta ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့အသုပ်၊ အပေါ်ယံပေါင်မုန့်တစ်လုံးနှင့်အနီရောင်ပုလင်းတစ်လုံးနှင့်တွဲဖက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
ကျော်အပေါ် ဦး ခေါင်းနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှု စားသုံးနိုင်သောမောရှေ နှစ်ခုများအတွက်အလွရင်ခုန်စရာ menu ကိုအဘို့! ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပဲနှင့်မုယောအသုပ်ကဒီမုန့်ညက်မှစတင်သည် .. ထို့နောက်အရသာကင်နှင့်အာလူး entree ။ ယုံကြည်ခြင်းကသူမအတွက်အထူးနည်းစနစ်ကိုမျှဝေသည် နူးညံ့ပြီးအရသာကင် ! ၏သင်တန်းဒီမုန့်ညက်ချိုမြိန် & အထူးတစ်ခုခုနှင့်အတူချွတ်ပြီး!
တေလာမှာ အစားအစာယုံကြည်ခြင်းကြံ့ခိုင်ရေး တစ်အရသာအရည်ရွှမ်းဝေမျှပေးသည် ချောကလက်ကော်ဖီကင်ပွတ် ! ဟုတ်ပါတယ်, ချောကလက်မဆိုရင်ခုန်စရာမုန့်ညက်မှပြီးပြည့်စုံသောဖြည့်စွက်ပါ! အကောင်းဆုံးအပိုင်းကဒီဖန်စီဟင်းပွဲကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းအတူတကွလာခြင်းဖြစ်သည်။
Parmesan Broiled Tilapia ငါ့အကြိုက်ဆုံးငါးဟင်းလျာများထဲကတစ်ခုပါ! ဒီဟာလုပ်ဖို့ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတယ်၊ သင်သည်ဤစာရွက်အတွက်မည်သည့်အဖြူရောင်အမျိုးအစားကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
နှစ် ဦး အတွက်အချိုပွဲနှစ်ခုအံ့သြဖွယ်အချိုပွဲမတိုင်မီနှစ်ခုအတှကျအံ့သြဖွယ်ညစာ shared ... ပုစွန်နှင့် Lemon Risotto ! ဒီဟင်းပွဲမှာရိုးရိုးလေးဟင်းခတ်အမွှေးနံ့သာနဲ့ပုဇွန်ကိုအသာပုတ်ထားတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သံပုရာရီစတိုတာပါရှိပါတယ်။
သငျသညျအံ့သြလောက်အောင်အထူးအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေလျှင်, သင်ထွက်စစ်ဆေးချင်ပါလိမ့်မယ် Mussels Marinra သို့မဟုတ် Fra Diavolo ထံမှ (သင်အနည်းငယ်အမွှေးအကြိုင်ထည့်ရန်သို့မဟုတ်မရွေးချယ်နိုင်သည်) မတ်ေတာ & အာဟာရမြည်းစမ်းပါ ။ ဒီပန်းကန်ဟာဝိုင်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့ပေါင်မုန့်တစ်လုံးနဲ့တွဲဖက်ပြီးပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။
Yummy ကျန်းမာလွယ်ကူသည် အတွက်ရင်ခုန်စရာညစာအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအံ့သြဖွယ် Salmon Dish မျှဝေခဲ့သည်! Pecan Crusted ပျားရည် - မုန်ညင်းမုန် မိနစ် ၃၀ အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အရသာပြည့်ဝသည်။ သင်အလွယ်တကူအိမ်မှာဒီအရသာတစ်ပန်းကန်စေနိုင်သည်ကိုယုံကြည်မည်မဟုတ်!
သန့်ရှင်းသော Yum ကြက်သား over for Two for Two မှာအားလုံးအကြိုက်ဆုံးအရသာအချို့ကိုပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ မယုံနိုင်စရာကောင်းသော်လည်းလုပ်ရလွယ်သောငံပြာရည်နှင့်အရသာကောင်းသောနူးညံ့။ အရည်ရွှမ်းသောကြက်သား! ဒီအရသာရှိတဲ့ပန်းကန်ကိုလုပ်ဖို့ငါသေနေပြီ။
Engagement Roasted Chicken …နာမည်ကသူ့ဟာသူမပြောတတ်ဘူးလား။ ကူးပါ အစားအစာကွန်ယက် အရည်ရွှမ်း၊ အရည်ရွှမ်းပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်လှော်သောကြက်သားကြော်အတွက်! ဒါဟာသင်ထင်ချင်ပါတယ်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူပါ!
ဝက်သားတင်ဒါသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်! ဒါဟာပိန်ပြီးအရသာပါပဲ။ နှစ်ယောက်အတွက်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောညစာအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအလတ်စားစာရွက်ကိုကျွန်ုပ်ရရှိပါသည်။ မှိုဘေကွန်ဝက်သား Tenderloin ကျပ် လွယ်ကူပြီးအရသာရှိပေမယ့်အထင်ကြီးကြည့်!
ဂန္ထဝင် Wedge အသုပ်
နံနက် Glory Muffins
လွယ်ကူသော Sloppy Joes